Soogalooti la barayo sida shirkadaha loo aasaaso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Emad Haj Ali oo wax ka bartay iskuulka lagu baraayo dadka waddanka ku cusub sidii ay shirkado u bilaabi lahaayeen.
Soogalooti la barayo sida shirkadaha loo aasaaso
iskuul lagu barayo dadka waddanka ku cusub asaasida shirkadaha.
La daabacay måndag 7 augusti 2017 kl 11.10
Iskuul lagu baro aasaasidda iyo maamulka shirkada dadka waddanka ku cusub, ayaa la sheegay in uu guulo soo hooyey.
Sidaas waxa sheegtay shirkadda dawladda ee Almi oo gobolka Halland ka bilawday waxbarashadan. Mohamed Ben Abdelhamid oo la taliya dadka doonaya in ay shirkado furtaan oo isagu waxbarashadaan dhiga ayaa nooga waramay waxa ay dadkaas waddanka cusub bartaan.
- Hadafka waxbarashada bilaabida shirkadaha waa in la siiyo dadka dalkan ku cusub fursaddo ay ugu mira dhalin karaan maamulida shirkadaha. Waxbarashadan waxa ay isugu jirtaa in dadka la baro sharciyada, cashuurta wadankaan iyo sida ay u shaqeeyso, caymiska iyo waxyaabaha la midka ah. Waxa kale oo aan barnaa sidii ay uga midho dhalin lahaayeen rayigooda ganacsi. Sidey u gaadhi lahaayeen dadka macaamiishooda ah. Sidoo kale meesha ay ka heli lahaayeen dhaqaale ay ku shaqeeyaan.
Iskuulkan dadka soogelootiga ah lagu barayo bilaabidda shirkadaha ayaa markii hore lagu bilaabay degmada Kungsbacka iyada oo hada ay shegtay shirkada Almi in ay waxbarashadaan ku balaadhin doonta magaalooyinka, Varberg, Halmstad, Hylte iyo Falkenberg.
Emad Haji Ali oo ka yimid waddanka Suuriya horena u ahaaan jiray rinjiyeeye shirkad leh ayaa ka mid ahaa dadka ka qeyb qaatay waxbarashadan. Ali waxa uu hadaba bilaabay shirkad cusub.
Waxay ahayd wax ka wanaagsan sidii aan moodaynay. Waxan baranay sida lagu bilaabi karayo shirkada sida loo qorshayn karo mustaqbalka iyo sida loo maareynayo sharciyada, ayuu sheegay Ali oo wax ka bartay iskuulkan.
Xiisaha loo hayo iskuulka noocan ah ayaa aad u baahsan sida uu sheegay Abdelhamid.
- Waxa jira xiisa weyn oo ay dadka soo galootiga ah u hayaan in ay helaan macluumad sidii ay u bilaami lahaayeen shirkado. Taasna waxan ka aragnaa codsiyada naga soo gaadhaya. Waxay doonayaan in talooyin in laga siiyo rayigooda ganacsi.
Abdelhamid waxa uu sheegay in aanu ilaa hada heynin wax tiro koob ah oo ku saabsan dadka bilaabay shirkado, balse waxa jiro dhowr qof oo Ali ka mid yahay oo shirkado bilaabay iyo qaar hada qorshihii wada, sida uu sheegay Abdelhamid oo ka mid ah dadka waxbarashada bixinayey.